Better Tomorrow: April 2008
သေမထူး နေမထူး ဘ၀ရောက်ကုန်ပြီ...
Posted by အောင်ကြည်မင်း at 10:44 PM4comments
Posted by အောင်ကြည်မင်း at 10:35 PM0comments
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရနောင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ နောက်ဆက်တွဲသတင်းများ
- ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော မြန်မာအလုပ်သမားများ ဓာတ်ပုံသတင်း မိုးမခ
- ထိုင်းတောင်ပိုင်း၌ သေဆုံးရသည့် မြန်မာအလောင်းများကို မြန်မာအာဏာပိုင်က လက်မခံ ဗွီအိုအေ
- သေဆုံးသူများကို မြှပ်နှံထားရှိသော သုဿန်နေရာ ဓာတ်ပုံ
Posted by အောင်ကြည်မင်း at 9:45 PM 1 comments
ထိုင်းတောင်ပိုင်း၌ အအေးခန်းကားအတွင်း ပိတ်မိသေဆုံးသွား သူများနှင့် ကျန်ရှိနေသူများ၏ သတင်းများ
Fifty - four Myanmar migrants suffocate in container Yahoo! New
့်အအေးခန်းအတွင်း မြန်မာ ၅၀ ကျော်အသက် ရှူကြပ်ကာသေဆုံး NMG
ကားပေါ်တွင် အသက်ရှူကြပ်ကာ မြန်မာအလုပ်သမားများသေဆုံး Yoma 3
မွန်းကြပ် သေဆုံးသော မြန်မာအလောင်းများ မီးသဂြိုဟ်ပြီး MIZZIMA
Burma deaths show immigrant labour system not working : ILO THE NATION
Thai court jails Myanmar container survivors for three days Yahoo! New
Jail and deportation for truck survivors Radio New Zealand
မြန်မာအလုပ်သမား ၅၀ ကျော်မွန်းကြပ်သေဆုံးမှု ILO ကြေငြာချက်ထုတ် RFA
ထိုင်းမှာ အသက်မသေကျန်ရစ်သူတွေ အရေးယူဒဏ်ခတ်ခံရ ဗွီအိုအေ
Posted by အောင်ကြည်မင်း at 6:26 AM 1 comments
ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတစ်ခု လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားသူ တစ်ယောက်အတွက် ရက်လည်ဆွမ်းသွပ် တရားနာပွဲလေးတစ်ခုကို ဘုန်းကြီး ၃ ပါးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တစ်ကယ်ဆိုရင် သူဆုံးတာ တစ်လကျော်နေပြီဆိုပေမယ့် ဒီနေ့မှ ပဲပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လာရောက် တရားနာသူ များကို ကော်ဖီ၊ မုန့်နဲ့ ပဲဧည့်ခံနိုင်ပါတယ်။
မိမိပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရင်း ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ တရားနာခြင်း၊ ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်ပေးမယ့် သူမရှိပဲ ကွယ်လွန်သွားရသူ အားလုံးကို အမျှပေးဝေပါတယ်။ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။
Posted by အောင်ကြည်မင်း at 10:44 PM0comments